Home Wararka Ciyaaraha Wax ka ogoow shan halyeey oo Real Madrid aysan ixtiraamin kahor Ramos.
Bixitaankii ugu dambeeyay ee Sergio Ramos Real Madrid ayaa mar kale dhalisay dood ku saabsan sida ay kooxdu ula dhaqanto ciyaartoydooda halyeeyada ah Waxaa jiray dhaleeceyn hore loogu jeediyay Real Madrid qaabkii ay ula dhaqmeen xidigaha waaweyn sida Iker Casillas, Cristiano Ronaldo iyo Zinedine Zidane waxaase markale la arkay Kabtanka kooxda Sergio Ramos oo ah halyeey Real madrid ah oo si xun uga tegaya.
Waxaa lagu tiriyaa Mid ka mid ah naadiyada ugu waa weyn kubada cagta adduunka, balse waxaa jira dareen ah in Real Madrid aysan inta badan sameynin xushmad ku saabsan halyeeyada kooxda Magacyo badan oo waa weyn oo kooxda ka mid ah ayaa kooxda uga tagay qaab liidto Waxaan eegnaa 5 xidig oo qaabkaan camal kaga tageen Real madrid.
Ciyaaryahanka warbixintaan ugu horeeyo waa xidiga reer Portugal ee Pepe Real madrid ayaa xidigaan xumsheeyn iyadoo iska iibisay Daafaca dhexe ayaa Real Madrid kaga soo biiray Porto lacag dhan 27 milyan ginni sanadkii 2007 waxaana uu magaciisa ka dhigay difaac adag oo aan ka xishoon dhinacyada kasoo horjeedo ee ciyaarta.
Pepe wuxuu ciyaaray 334 kulan tartamada oo dhan intii lagu jiray tobankii xilli ciyaareed ee uu kooxda la joogay, wuxuuna ku guuleystay seddex koob oo La Liga ah iyo seddex koob oo Champions League ah balse lama ixtiraamin.
Xidiga ku xigo waa Zidane waa Mid ka mid ah ciyaartoydii ugu weyneyd abid, Zinedine Zidane wuxuu cadeeyay inuu yahay tababare heer caalami ah sidoo kale intii uu socday labadii jeer uu macalinka u noqday Real Madrid.
Tababaraha reer France ayaa loo magacaabay inuu noqdo macalinka Real Madrid bishii Janaayo 2016 ka dib ceyrintii Rafa Benitez Zidane wuxuu Real Madrid u horseeday seddex guul oo isku xigta oo Champions League ah intii lagu gudajiray waayihiisii tababarnimo eeugu horreeyay Los Blancos, iyadoo Real Madrid ay noqotay kooxda loogu cabsida badan qaarada Yurub intii uu ku sugnaa.
Zidane ayaa si lama filaan ah ugu dhawaaqay bixitaankiisa ka dib guushii seddexaad ee Champions League Si kastaba ha noqotee, wuxuu ku soo laabtay kooxda 2019, isagoo u horseeday hanashada La Liga 48 jirkan ayaa ka tagay Real Madrid markii labaad sannadkan, isagoo ku dhaleeceeyay kooxda inaysan kalsooni ku qabin isaga.
Previous articleWararka Suuqa kala iibsiga: PSG oo dalab u direysa Paul Pogba, Chelsea oo ku dhawaaneysa Achraf Hakimi iyo Qodob kale
Next articleHarry Kane oo doonaya inuu kula midoobo Mauricio Pochettino kooxda Paris Saint-Germain.